Kutakura muUnited States | Absolut Kufamba
United States inyika hombe yakabatana kwazvo mukati nenzira dzakasiyana dzekufambisa senge chitima, ndege, mota uye bhazi.
Iyo US yekufambisa network inoshanda zvakanyanya mune zvakajairika mazwi uye inokutendera iwe kufamba famba nenyika zvakanyatsogadzikana uye nekukurumidza. Kana iwe uri kuronga rwendo kuenda kuUnited States uye uchida kuziva mafambiro aungaita kubva kumahombekombe uchienda kumahombekombe, usapotsa ichi chinyorwa kwatinotsanangudza ndedzipi nzira dzekufambisa muUnited States.
1.1 Ndeipi yekufamba nendege muUnited States?
1.2 Ndege dzaunogona kufamba nadzo
2.1 Chii chinotora kutora kutyaira muUnited States?
2.2 Chii chaunoda kuti uzive kutyaira muUnited States?
3 Kufambisa kweruzhinji muUnited States
3.2 Ndezvipi zvitima zvakaita muUnited States?
3.3 Ndeapi nzendo dzekuita nechitima muUnited States?
3.5 Ndeapi makambani makuru emabhazi?
Ndege ndiyo nzira iri nyore kwazvo yekufambisa yekufamba mukati memunyika kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe sezvo network yenyika yekubhururuka yakakura uye yakavimbika nezviuru zveendege dzezuva nezuva, ndege zhinji uye mazana enhandare. Mazhinji maguta makuru ane nhandare imwechete ine nendege dzakanangana nekubatana zviripo.
Nyika yakakura kwazvo saka kana kana uriko iwe uchida kufamba kubva kumahombekombe kuenda kumahombekombe munguva ipfupi, zvinoita kutora ndege sezvo rwendo ruchakutora iwe isingasviki maawa matanhatu uchienzaniswa nerwendo rwemazuva akati wandei kufamba nechitima kana mota.
Ndeipi yekufamba nendege muUnited States?
Kana iwe uri kutsvaga kuchengetedza imwe mari neyako matikiti endege, chinhu chakanakisa kuita kuronga rwendo rwako pamberi. Munguva yakapfuura, ndege dzendege dzakaedza kubvisa zvigaro zvakawandisa paminiti yekupedzisira, saka waifanira kumirira nguva yakareba kuti utenge matikiti emhepo anodhura. Zvisinei, nhasi mamiriro ezvinhu achinja uye kune ndege dzendege dzinowanzo kupa vafambi mitengo iri nani.
Pane dzimwe nguva dzakadai sekuzorora kwechirimo, zhizha kana manheru ezororo uye emahombekombe emahombekombe, kumirira kusvikira zuva rekupedzisira kuti uwane matikiti emhepo kunogona kudhura nekuti inguva yakakwira uye kufamba nendege muUnited States kunodhura. Kana iwe uine mukana wekufamba kuenda kuUnited States mukati menguva yakaderera, ndiyo inonyanya kukurudzirwa nekuti matikiti endege anodhura. Izvo zvakafanana nekufamba pakati pevhiki pane kupera kwevhiki. Nenzira iyi iwe unozochengetedza imwe mari.
Ndege dzaunogona kufamba nadzo
Dzimwe dzendege dzenyika dzinoshanda muUnited States ndeiyi: American Airlines, Delta Air, United Airlines, US Airways, Skywest Airlines, Southwest Airlines, Hawaiian Airlines kana Virgin America, pakati pevamwe.
Ese matunhu enyika ane huwandu hwakanaka hwendege dzinobhururuka kuenda kumaguta akasiyana siyana zuva nezuva. Muchokwadi, United States ine 375 nhandare dzemumba.
Pakufamba uchitenderera United States pazororo, vafambi vazhinji vanosarudza mota nekuti inogona kunge iri chiitiko chinonakidza. Uye ndizvo imwe yemigwagwa inozivikanwa kwazvo munyika ndeyeRoute 66 inozivikanwawo se "mugwagwa mukuru muUnited States."
Pamakiromita angangoita zviuru zvina pakureba, Nzira 4.000 inoyambuka nyika kubva kumabvazuva kuenda kumadokero kuburikidza nenyika sere (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona neCalifornia) kubva kuChicago kusvika kumagumo kuLos Angeles. Kuita nzira nemotokari kana mudhudhudhu ndiko kurota rwendo kune vanhu vazhinji. Zvisinei, Kufamba famba neUnited States nemotokari unofanirwa kuziva kutyaira ikoko nekuti mutemo wayo unogona kunge wakasiyana neuyo wenyika yako.
Chii chinotora kutora kutyaira muUnited States?
Kana iwe uri kufamba sevashanyi, mumatunhu mazhinji iwe uchazoda rezinesi rekutyaira repasi rese. Pamwe ukaenda kunoroja mota havazokumbira asi kuitora haimborwadzi nekuti iri nyore kuwana.
Semuenzaniso, mune iyo Spain yekuiwana iwe uchafanirwa kunge uine rezinesi rekutyaira rinoshanda uye maitiro acho anogona kuitwa nekukurumidza online. Zvese zvaunoda ndeye yemagetsi DNI, zadza fomu kukumbira mvumo uye kubhadhara mari. Mazuva maviri gare gare iwe unogona kuitora pane chero traffic hofisi ichipa ID yako kuti uzvizivise iwe uye parizvino ruvara pikicha ye32 x 26 mm. Kamwe payakaburitswa, rezinesi rekutyaira repasirese rine nguva yekutendeseka yegore rimwe.
Rangarira kuti kukwereta mota muUnited States zera repasi rinodiwa makore makumi maviri nerimwe, kunyangwe mune mamwe matunhu angave makore makumi maviri nemashanu.
Chii chaunoda kuti uzive kutyaira muUnited States?
Kunyangwe uri nyika ine tsika yeAnglo-Saxon, muUnited States unodhiraivha kurudyi, iro divi remugwagwa senyika zhinji dzeEurope neSpain. Nekudaro, isu tinofanirwa kuziva kuti nyika yega yega inogona kuve nemirau yakasiana yemigwagwa. Saka, Usati watanga kutyaira, iwe unofanirwa kuziva nezve mamakisi emumigwagwa uye nemipimo yekumhanyisa mumatunhu auri kuzoshanyira.
Kune rimwe divi, United States inyika ine nzvimbo hombe dzenzvimbo diki inogarwa panotonga zvisikwa, saka kana iwe usingazive nzvimbo yacho zviri nyore kuti kudzoka kusimuke uye kurasika. Kuti udzivise izvi, kana uchizohaya mota muUnited States, ita shuwa kuti une GPS yakagadzirisa mamepu emigwagwa.
Kufambisa kweruzhinji muUnited States
Imwe nzira yekutenderera neUnited States chitima. Iyi sarudzo yakanaka kana uine nguva yakawanda yekufamba, kana usina rezinesi rekutyaira repasi rese kana kana iwe usiri kuda kuomesa hupenyu hwako neGPS uye madhairekisheni paunenge uchihaya mota. Chii chimwe, Kana iwe ukasarudza chitima kutenderera muUnited States, chakanakira ndechekuti iwe unogona kunakidzwa nenzvimbo dzinoyevedza (meadows akakura, makomo marefu nemisha inoyevedza) paunenge uchifamba zvakanaka.
MuUnited States, uyo anopa sevhisi iyi ndiAmtrak, mutyairi wenyika yose unobatanidza North America kuburikidza nehurongwa hwayo hwemigwagwa inopfuura makumi matatu ine zvitima zvinoenda kunzvimbo dzinopfuura mazana mashanu mumatunhu 30 neWashington DC
Kutenda kuhukama hwakasiyana pakati pemaguta makuru muUnited States, kana ukafunga kufamba nechitima unogona kuenda nechitima kuenda kuNew York, Philadelphia, Boston, Chicago, Washington DC, Los Angeles neSan Francisco. Mamwe maguta munyika anogona kunge aine diki nzira-kana maviri-nzira njanji yekubatanidza yekufamba uchitenderera nzvimbo.
Zvakare, maguta mazhinji munyika ane zvitima zvemumadhorobha masisitimu ayo anowanzo kupa kubatana kuzviteshi zvechitima zvemuno uye anomhanya pakati pemaguta nenzvimbo dziri pedyo.
Ndezvipi zvitima zvakaita muUnited States?
Zvitima zvakawanda zveAmtrak zvine zvigaro zvakakurisa kutambanudza makumbo ako nekuzorora, neWi-Fi yemahara, zvimbuzi, uye chikafu. pakati pemamwe masevhisi. Uye zvakare, kune iwo marwendo ane marefu marefu pane ngoro dzine dzimba dzekurara.
Ndeapi nzendo dzekuita nechitima muUnited States?
Pakati penzira dzinopihwa naAmtrak kune vafambi, pane maviri ayo, nekuda kwekusiana kwavo, chingave chiitiko chinonakidza kuita: California California Zephyr chitima (iyo inoteera nzira yakaitwa nevatariri vegoridhe kumadokero kuburikidza nenzvimbo nomwe dzenzvimbo dzakanaka) kana chitima cheVermonter (kuti uone nzvimbo dzakanaka dzeNew England, maguta ayo enhoroondo nemachechi ayo ane machena mawere).
Imwe yedzinoshandiswa zvakanyanya nzira dzekutakura muUnited States kutenderera nyika ndiro bhazi. Zvikonzero zvekusarudza izvi zvakawanda: akasiyana makambani anopa iyo sevhisi nemitengo yemabhajeti ese, kubatana kwakanaka pakati pemaguta mazhinji uye akachena, akasununguka uye akachengeteka mota.
Maguta mazhinji akakura ane netiweki dzemabhazi emuno, kunyangwe sevhisi pakupera kwevhiki uye husiku ishoma.
Kana nguva isiri dambudziko, bhazi rinogona kunge iri nzira inonakidza yekuongorora nyika sezvo ichikubvumidza iwe kuti uone nzvimbo dziri kure kwazvo nenzvimbo dzakasiyana izvo zvaisakwanisika kana iwe ukazviita nendege.
Ndeapi makambani makuru emabhazi?
Greyhound: ndiyo quintessential yakareba-bhazi kambani inovhara nzira dzenyika dzinenge dzese neCanada.
Boltbus: inoshanda zvakanyanya kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva (yakawanda yeNew England neNew York nyika pakati pedzimwe nzvimbo).
Megabus: iyi kambani inobatanidza anopfuura maguta makumi mashanu uye zvakare ine nzira dzinoenda kuCanada. Iyo ine yakakwikwidza mitengo.
Vamoose: imwe yeanonyanya kushandiswa nevaya vanofamba pakati peWashington neNew York kazhinji.
Haisi nzira yekufambisa iyo inoshandiswa kufamba pakati pemaguta asi mukati menzvimbo imwechete. Maguta ese makuru muUnited States ane boka rakakura rematekisi. Panhandare dzinowanzo kuve nyore kutora tekisi nekuti kune akawanda anotora vashanyi kuenda pakati peguta, asi zvinopesana zvakati omei uye hazviwanzo nyore kuwana yemahara.
Kupesana nezvinotendwa nevanhu vazhinji, matekisi muNew York haana kudhura zvakanyanya. Ivhareji yemutengo werwendo rwakajairika kuburikidza neManhattan ingangoita madhora gumi asi kana iwe uchikurumidza, ndinokukurudzira kuti utsvage dzimwe nzira senge yepasi pevhu nekuti traffic muManhattan inogona kunge ine mhirizhonga uye traffic jams inowanzoita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kutakura muUnited States
Aurora Borealis kuDenmark